Guddiyada TPCH & Isbahaysiga Bulshada - Iskaashiga Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
Guddiyadu waa xarunta neerfaha ee TPCH. Xubin ka tirsan guddiga ayaa kormeeraya oo kormeeraya shaqada la wadaago ee TPCH iyo xubnaheenna. Waxay siiyaan hagitaan iyo khibrad Guddiga CoC.
Xubnaha guddiga waa la doortaa oo la magacaabaa sannad kasta. Doorashada sanadlaha ah waxay dhacdaa bisha Maajo waxaana ku xiga magacaabista xubnaha guddiga loo magacaabay dhammaadka bishaas. Shaqooyinka ka banaan guddiga waxaa lagu aqoonsaday hoos. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan codsashada buuxinta kursi ka bannaan guddiga, fadlan emayl u soo dir tpch@tucsonaz.gov.
Sii wadida Guddiga Deeqda Barnaamijka Daryeelka
Guddiga Deeqda Barnaamijka Sii-wadashada ee Daryeelka (CoC) wuxuu siiyaa khibrad iyo hagitaan Guddiga CoC ee la xiriira barnaamijka maalgelinta Daryeelka ee HUD ee degmada Tucson / Pima.
Hadda 1 kursi oo bannaan oo guddiga ah ayaa diyaar ah iyo 1 Kursiga bannaan ee guddiga ayaa diyaar u ah qofka leh waayo-aragnimada guri la'aanta 5tii sano ee la soo dhaafay.
Guddiga Isku-duwaha Isku-darka wuxuu siiyaa khibrad, kormeer iyo hagitaan Guddiga CoC ee la xiriira TPCH Nidaamka Gelitaanka Isku-dhafan.
Hadda 2 Kuraasta guddiga banaan ee banaan iyo 1 Kursiga bannaan ee guddiga ayaa diyaar u ah qofka leh waayo-aragnimada guri la'aanta 5tii sano ee la soo dhaafay.
Hadda 4 Kuraasta guddiga banaan ee banaan iyo 1 Kursiga bannaan ee guddiga ayaa diyaar u ah qofka leh waayo-aragnimada guri la'aanta 5tii sano ee la soo dhaafay.
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Macluumaadka Guri la'aanta (HMIS)
Nidaamka Macluumaadka Maareynta Maareynta Guri la'aanta (HMIS) wuxuu siiyaa khibrad, kormeer iyo hagitaan Guddiga CoC ee la xiriira TPCH Nidaamka Macluumaadka Maareynta Hoy la'aanta.
Guddiga Qiimeynta Waxqabadka Nidaamka wuxuu kormeeraa waxtarka iyo hufnaanta nidaamka ka jawaab celinta hoy la'aanta ee Tucson / Pima ee dadaallada looga hortagayo iyo joojinta hoy la'aanta ka jirta gobolka. Guddiga wuxuu siiyaa khibrad iyo hagitaan Guddiga CoC si loo hagaajiyo waxqabadka nidaamka.
Hadda 1 Kursiga bannaan ee guddiga ayaa diyaar u ah qofka leh waayo-aragnimada guri la'aanta 5tii sano ee la soo dhaafay.
6 boos oo banaan oo dhalinyarada kayar 25 sano leh khibrad nololeed oo hoy la’aan iyo / ama deganaansho la’aan.
Isbahaysiga bulshada ee TPCH wuxuu siiyaa shirar furan xubnaha bulshada, adeeg bixiyaasha, iyo dadka ay soo wajahdo hoy la'aantu inay la wadaagaan kheyraadka ayna iska kaashadaan sidii loo hormarin lahaa dadaalada looga hortagayo loona joojinayo hoy la'aanta. Isbahaysi kastaa wuxuu leeyahay aag gaar ah oo diiradda la saarayo (sida halyeeyo, hoyla'aanta dhalinyarada, wacyigelinta bulshada, iwm.) Booqo iskuxirka kore si aad uhesho liistada buuxda ee isbahaysiga bulshada TPCH.